Shina: Ao Amin’ny Aterineto Ny Mponina no Miresaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2017 7:14 GMT
Somary mizotra ho amin'ny tsara ny raharaha ho an'ireo manana trano miorina ao Shina, na toa aza tsy mbola tonga hatrany amin'ireo tanàndehibe ny zo hifidy amin'ny fifidianana. Tato anatin'ny taona vitsy lasa, ireo tompom-panànana miorina ao Shina dia niezaka nanao izay tratry ny herin'izy ireo hanairana ny saina [sy mba hanapariahana ny fitantànana ireo toeram-ponenana], saingy mazàna ry zareo no tsy maintsy miditra amin'ny fampiasana hery mba hihainoana ny fitakiany.
Manana ny lalàna napetrany ho an'ireo mpanofa ve ireo tanàna shinoa ? Raha toa ka tena marefo ny zon'ireo tompony, inona no azo lazaina momba ny an'ireo manofa izany amin'ireo mpanofa ? Manomboka mivondrona mikarakara ny momba azy ireo samy tompon-trano, ary, araka ny lahatsoratra iray an'ilay bilaogera ira tsy miankina '50mm’ dia izany koa no mitranga, matetika , ho an'ireo mponina any amin'ireo vondrom-piarahamonina an-tanandehibe sasantsasany ao Shenzhen, atsimon'i Shina, manamorona ny sisintany iraisany amin'i Hong Kong.
« Nanokatra sehatra fifampiresahana ety anaty aterineto ho an'ireo tompon-trano isaky ny rantsam-piarahamonina ilay tranonkala mpanome vaovao momba ny trano fonenana ao Shenzhen. Miresaka sy mandrary finamànana ao ireo tompon-trano, ao anaty habaka dizitaly natokana ho an'ireo vondrona eo amin'ny faritra onenany. Amin'ny lafiny iray dia lasa fikambanana ifanampiana an-tserasera ireo sehatra fifampiresahana ireo ho an'ireo olompirenena nividy trano ho an'ny fandraharahàna ara-barotra. Fa mba ahoana ny amin'ireo mpanofa, ireo izay manofa trano any amin'ireo toerana fonenana an-tanandehibe ireny ? Marobe amin'ireny mponina ireny no tanora ary sambany vao tonga ao Shenzhen, olona izay mandray karàna azo lazaina ho ambany tokoa. Manana filàna mivaivay mba hiresaka amin'ireo mponina hafa izy ireny, ety an-tserasera, saingy tsy mbola manome ny tolotra fifampiresahana mifandraika amin'izany aloha ny ao Shenzhen, satria ireny mponina ireny tsy mbola nampiseho ny maha-olon'ny fiarahamonina misy azy ireny. Toy ny fasika entin-drivotra monja ihany, dia toa mirona amin'ny fandraisana zotra samihafa ny làlana izoran-dry zareo, ary mankany amin'ny fifindràna trano matetitetika. Io no antony tsy mbola isian'ny olona mihevitra aloha hatreto ny hametraka sehatra iray ho an'ireo mponina any amin'ireo vondrom-piarahamonina an-tanandehibe ».
« Tena izay tokoa va re? Manana namana vavy iray aho, antsoina hoe Ah Rong, monina ao Xiasha [Ang.] efa ho roambinifolo taona ary lasa mpinamana be amin'ny tompon-tranony. Rehefa mivoaka ny trano izy, dia saiky fantany daholo izao olona rehetra izao. Nahita ny fiovàna miandàlana niainan'ny tanàna izy, niainga avy aminà vohitra kely teny an-tsisin”ilay tanàndehibe ka tonga tanàna be mimanda hipoka olona sy maresaka. Ho an'ireo olona toa an'i Ah Rong, izay nikolokolo toetsaina fahatsapàna lalina ho miaina anaty tiarahamonina ao Xiasha, tsy dia ahazoana aina loatra ny fifindrafindràna toerana fonenana, hoy izy”.
Sary avy amin'ny zanabolana ahitàna ny tanànan'i Tri-Sha
« Any atsimon'ny lalambe migodàna ao Binhai no misy an'i Xiasha, ao amin'ny distrikan'i Futian, ao andrefan'ny araben'i Xinshou. Vohitra marobe no mandrafitra io io distrika io : Shatou, Shwei , Shazui ary Shatou, samy miparitaka eo anelanelan'i Shangsha (ambony) sy Xiasha (ambany). Tena mifanakaiky tokoa ireny vohitra ireny. Miaraka amin'ireo mponina an'aliny marobe iraisan'izy rehetra ireo, betsaka koa ireo olona tonga avy any rehetra any, toa an'i Ah Rong, saingy tsy mitovy aminy ireny satria tsy mbola nonina elabe tao».
« Raha ny marina, mba mila ihany koa ny torohay avy eo an-toerana ireo olona izay vao tonga nifindra ho amin'ny toeram-ponenana iray an-tanàndehibe, mba hahafantarany izay toerana mivarotra ny paty tsara indrindra, aiza no trano fandònana tongotra manome ny tolotra tsara indrindra, aiza ireo mpanofa trano no afaka mahazo vaovao momba ny fifanarahana fampanofàna trano. Tsy ela akory izay no nahitàko fa misy vondrom-piarahamonina toy izany ety anaty serasera ety, ny Tranonkalan'ny Vondrom-piarahamonina ao Tri-Sha, tena ireo karazana tolotra ireo mihitsy no omeny. Tanora iray mpampiasa azy io, antsoina hoe Benny no nanokatra sehatra iray fifanakalozana ho an'ireo mpanofa trano ao Shatou, izay manome sehatra iray ifanakalozana noho ny fisian'ny aterineto. Mizara ho sokajy roa lehibe ilay sehatra fifampiresahana, vaovao eo an-toerana, sy fialamboly/torohay momba ny fotoana mampahalalaka ny tsirairay. Hu Luo Ping Anm no nanoratra ny ankamaroan'ireo lahatsoratra vao haingana hita ao, arahan'ireo hafatra toy ny hoe « Androany aho eto anoloan'ny toby miaramila eto Xiasha ary saiky voakaikitry ny alika iray mpirenireny ». Na iray hafa izay itarainan'i San Sha Yi Shui hoe: « Androany, nitsangantsangana tao amin'ny kianjan'i Xiasha aho ary nisy nanendaka ny telefona findaiko ». Hatreto aloha dia tsy mbola tena mavitrika ny fampiasàna io sehatra fifampiresahana io, ary zara raha misy ampolony ireo hafatra voapetraka ao».